Force Android Nougat fanavaozana ao amin'ny Huawei P9 Lite | Androidsis
Francisco Sanchez | | Huawei, Tutorials, Android Version
Amin'izao fotoana izao ny isan'ny mpampiasa Android izay mbola ao Marshmallow dia avo kokoa noho izay efa novaina tamin'ny kinova Android Nougat vaovao. Noho izany, anio no itondrako anao ity fampianarana ity Hampianariko ianao hametraka ny kinova maimaim-poana ary avy eo terena ny fanavaozana Android 7.0 amin'ny Huawei P9 Lite ho an'ny terminal Eropeana L-31.
Amin'izany fomba izany, hahazo fanavaozam-baovao amin'ny ho avy isika nefa tsy mila miandry ho an'ny orinasantsika hanamboatra ny rindrambaiko ary handefa ny fanavaozana satria matetika izy ireo dia maharitra fotoana lava hamitana io fomba io.
2 Ampidino ny firmware Firmware European Version (C432)
3 Mangataha kaody mamoha anao
4 Mametraha fanarenana
6 Fametrahana Firmware maimaim-poana.
7 Fampivoarana hery amin'ny alàlan'ny fampiharana HiCare
Ity dingana ity dia misy risika, Raha arahana mafy ireo dingana izay hazavaina dia tsy tokony hisy ny olana.
Amin'ny fanatanterahana an'io dingana io dia tsy ho very antoka isika, saingy anoroana hevitra fa raha misy antony tsy mahasosotra ny terminal ary mbola manana ny antoka azo antoka isika ankehitriny dia tsy maintsy miverina amin'ny Android Marshmallow
Alohan'ny hanarahana ity fampianarana ity, andramo ny manao backup hatramin'ny dingana manaraka manamboatra famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny famafana izay rehetra ananantsika ao amin'ny terminal.
Ity fomba ity dia atolotra ho an'ny olona rehetra nahazo an'ity terminal ity tamin'ny alàlan'ny orinasan-telefaona manokana ary tsy manana antoka na faharetana, satria mampivadi-po ny zava-misy ny fiandrasana azy hanavao ny Android Nougat. Mety hamafiso fa ity fampianarana ity dia ho an'ny terminal eropeana (L-31). Na izany aza, misy fomba iray hanerena ny fanavaozana ao amin'ireo terminal any Amerika Latina.
Raha tonga hatreto ianao dia azo antoka fa liana amin'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny Huawei P9 ianao, ny fomba hanonganana ny lite P9 ary fanadihadiana lalina momba ny Huawei P9
Ampidino ny firmware Firmware European Version (C432)
Amin'ity tranga ity dia avelako ianao ny rohy ny kinova azo antoka indrindra amin'ny kinova Eraopeana maimaimpoana C432B160 satria misy ny hafa manana olana amin'ny serivisy google play ary tsy mamela ny telefaona halamina tsara. Tsy maintsy esorintsika io mandra-pahatongantsika mamela rakitra antsoina hoe Update.app. Vantany vao nesorina, dia mamorona fampirimana amin'ny karatra SD antsoina hoe dload isika, ao anatin'io no maka tahaka ny rakitra izay navoakanay.
Mangataha kaody mamoha anao
Araka ny nohazavaiko tany aloha tany amin'ny lesona hafa, tsy maintsy manana ny safidy mamoha OEM sy ny debugging USB isika. Raha mangataka ny kaody dia tsy maintsy miditra amin'ny Pejy Huawei ary fenoy ny fampahalalana takian'izy ireo.
Taty aoriana miaraka amin'ny izany Fitaovana mamoha ny bootloader izahay mba hametrahana ny fanarenana mifanaraka amin'ny kinova Android ananantsika, amin'ity tranga ity Marshmallow. Tao anatin'ny zip dia navelako ho anao ny fitaovana mamoha, ny fanarenana an'i Marshmallow ary rakitra roa izay hazavaiko hoe inona no ilain'ny tsirairay.
Manomboka ny terminal amin'ny fomba fastboot izahay, Volume- ary mampifandray ny terminal izahay amin'ny pc.
Izahay dia mamaha ny zotram-bokatra avelako ao anatin'ny zip miaraka amin'ny anarana TWRP Marshmallow sy manomboka ny rakitra izay miafara amin'ny ramanavy isika.
Avy eo dia tsindrio ny Enter ary hipetraka irery ny fanarenana.
Avelantsika hanomboka ara-dalàna ny terminal.
Ny terminal Era P9 Lite eropeana rehetra dia tonga amin'ny alàlan'ny SIM tokana fa afaka misafidy hanao azy roa sim izahay. Namela fisie roa misy anarana OEMINFO aho fa tsy mitovy izy ireo, ny iray ho an'ny Dual Sim ary ny iray ho an'ny Single Sim. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny OEMINFO ss izahay, satria izany no izy amin'ny alàlan'ny default amin'ny terminal.
Apetrakay amin'ny SD ny fisie OEMINFO
Manomboka amin'ny maody fanarenana izahay ary manome izahay Install
Izahay dia mitady ilay rakitra antsoina hoe OEMINFOC432SS amin'ny karatra SD
Mifindra amin'ny alàlan'ny fikorisa ny bara izahay mba hanamafisana.
Ny slot SIM dia manohana iray faharoa, hoy ny fiasa ampiasain'ny rindrambaiko.
Raha vantany vao nalefanay ny rakitra, ny sisa tsy maintsy ataontsika dia ny miverena amin'ny fanombohana fanarenana amin'ny alàlan'ny fanindriana ary tsy tokony hamerina toy ny fanaontsika mahazatra intsony, vonoinay tanteraka ny terminal miaraka amin'ny safidy Reboot> Power off.
Fametrahana Firmware maimaim-poana.
Mametraka ny firmware C432B160 an'ny kinova maimaim-poana dia tsy maintsy manana ilay rakitra update.app izay nolazainay tamin'ny fiandohan'ity lesona ity, amin'ny karatra sd ao anatin'ny folder dload. Raha efa nanao ity dingana ity isika dia ny sisa tavela dia bokotra mitambatra Volume +, Volume- ary Heryindray mandeha hampihatra ny firmware vaovao.
Fampivoarana hery amin'ny alàlan'ny fampiharana HiCare
Developer: Serivisy Internet Huawei
ankehitriny manery ny fanavaozana tena irina amin'ny Android Nougat ny hany tokony hataontsika apetraho ny fampiharana HiCare, manaova SIM ao anatin'ny terminal anay, atombohy amin'ny Huawei ID anay ary ampifanaraho ny firenentsika ary avy eo midira amin'ny safidin'ny mpampiasa Voalohany amin'ny fanavaozana ny OS ary halefany ho azy ilay kinova C432B370 na B371 ho an'ny mpanavao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Force Android 7.0 vaovao farany amin'ny Huawei P9 Lite
Mety io! lahatsoratra tena tsara ary voazava tsara !!
Rich dia hoy izy:
Salama, ity dia mety amin'ny P9 mahazatra ary misaotra?
Valiny tamin'i Rich
Tsy ny kinova farany, Bluetooth tsy mandeha, ankoatry ny zavatra hafa.
Azonao atao ve ny manampy ahy, amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ozinina aorian'ny fametrahana rehetra dia navela tsy nanana klavier aho ary tsy mamela ahy handalo ny teboka hidirana amin'ny kaonty google
Iago dia hoy izy:
Francisco, azo atao ve ny mampakatra indray ny rohy? Miseho lavo
Valio i Yago
Nahazo tohana ho an'ny fampiharana Android ny Chromebook vaovao
Twitter dia manavao ny interface ho an'ny Android, iOS ary ny tranonkala